ဗမာပြည်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုထဲဝင်ရောက်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကတည်းက ဒိုင်ယာယီရေးတဲ့အကျင့်ကို မေ့ပစ်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်လောက်ရှိတော့မယ်ထင်ပါတယ်။ ဗမာပြည်မှာက ဒီမိုကရေစီရေး နိုင်ငံရေး ဆိုတာ ဗြောင်မှ လုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိတာဆိုတော့ မြေအောက်အသွင်နဲ့လှုပ်ရှားရတဲ့အခါကျတော့ ဒိုင်ယာယီ ရေးတတ်တဲ့သူတွေအဖို့ ကိုယ်ရေးတဲ့ဒိုင်ယာယီကြောင့် ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ပြန်ပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ဒိုင်ယာယီရေးတာကို မေ့ပစ်ခဲ့ရတယ်။ အခု အိုင်တီခေတ် အင်တာနက်ခေတ်မှာရောက်လာတော့ တချို့ လည်း (လုပ်တတ်သူတွေက) ၀က်ဘ်ဆိုက် လေးတွေ၊ ဘလော့လေးတွေ လုပ်ကြ ရေးကြနဲ့၊ အဲဒါတွေမလုပ်တတ်တဲ့သူတွေ ဘလော့ခေတ်ကို (အကြောင်း ကြောင်းကြောင့်) မဖြတ်သန်းလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေအဖို့ကျတော့လည်း အခုခေတ် (facebook ခေတ်မှာ) facebook ပေါ်မှာ တောင်ခြစ်မြောက်ခြစ် ဟိုရေးသည်ရေးပေါ့။ ကျနော်လည်း အခု ဒိုင်ယာယီပဲပြောရမလား၊ တောင်ခြစ်မြောက်ခြစ်ပဲ ဆိုရမလား၊ ဟိုရေးသည်ရေးပဲ ခေါ်ရမလား (တနင်္ဂနွေနေ့) ဆိုတော့ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ရေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါက ....... ပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာ တပည့်မလေးတယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ရော၊ ဖင်လန်မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ရော နှစ်ခုစလုံး သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ တပည့်မလေး ကျနော့်ကိုတွေ့လိုက်တော့ အတော် ၀မ်းသာသွားတဲ့ပုံရှိတယ်။ ကျနော်လည်း ကြေနပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ တပည့်မလေးတယောက်၊ ကိုယ့်ဗမာနိုင်ငံသားခုလို မိကောင်းဖကောင်းသားသမီးပီပီ၊ ဗမာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာပီပီ အိမ်ထောင်တခုကို တရားဝင် တင့်တင့်တည်တည် တည်ထောင်သွားခဲ့တာ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်။ ဖင်လန်မိတ်ဆွေရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကျတော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ Savonia Hotel မှာ ကျင်းပတယ်။ အစားအစာကျွေးမွေးဧည့်ခံတယ်၊ စန္ဒယားနဲ့သီဆိုဖျော်ဖြေတယ်။ ထူးခြားတာက ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင် ပကာသနကင်းတယ်။ ကျနော်တို့ တပည့်လေးတွေရဲ့ ရှင်ပြုမင်္ဂလာတော့ မသွားဖြစ်တော့ဘူး။ မသွားဖြစ်တာကလည်း အမျိုးသမီးက ကိုယ်လေးလက်ဝန်နဲ့ဆိုတော့ ရှင်ပြုမင်္ဂလာကျင်းပတဲ့ Helsinki နဲ့ဆို ခရီးဝေးတာရယ်၊ ဟိုမှာ နေရထိုင်ရ ခက်ခဲမှာ၊ ပင်ပမ်းမှာရယ်ကြောင့် မသွားဖြစ်လိုက်ဘူး။ ၀မ်းသာပီတိတော့ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရင်လေးတွေ လူထွက်ပြီး ပြန်ရောက်လာတော့ ကျနော့်အိမ်ကိုလာသွားကြတာကြည့်ပြီး ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်။ လာမည့် မြူနီစပယ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အစည်းဝေးကတော့ အတော့်ကို ပျင်းစရာကောင်းပါတယ်။ အရင်က ဒီမှာလုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေဆိုရင် မဲဆန္ဒနယ်တခုခုမှာ မဲရုံတာဝန်ကျတယောက်အဖြစ်နဲ့ ခဏခဏ တာဝန်ယူခဲ့ဖူးတော့ ဒါတွေက သိနေပြီးသားဆိုတော့ အစည်းဝေး မှာ လူကငုတ်တုတ်သာထိုင်နေရတယ် စိတ်ကတောင်တွေး မြောက်တွေး။ သူတို့ပါတီကနေ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ပါတီတခုကိုတော့ လှလှပပ ပဲ ငြင်းလိုက်ရတယ်ဗျာ။ အစောပိုင်း သူတို့ကမ်းလှမ်းတုန်းက ကျနော် စဉ်းစားပါဦးမယ်ဗျာလို့ ပြောပြီး နည်းနည်း မူ ကြည့်လိုက်တယ်။ သူတို့ တကယ်ကမ်းလှမ်းတာလား၊ စကားအဖြစ်နဲ့ ကမ်းလှမ်းတာလား၊ သူတို့ပါတီမှာ နိုင်ငံခြားသား (ဖင်လန်နိုင်ငံသားမဟုတ်သူ) ဒုက္ခသည်တယောက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ၀င်ရောက် အရွေးခံတယ်ဆိုတဲ့ပြရုပ်သက်သက်လား သိချင်လို့ မူ လိုက်တာ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့က တကယ်ပဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကမ်းလှမ်းတာသိရတော့ အတော်ခက်သွားတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ မိန်းမ ဗိုက်ကိုပဲ အကြောင်းပြ၊ ဒီလိုဗျာ ကျနော့်အခက်အခဲက ခင်ဗျားတို့ကို ပြောပြရတော့မှာပဲ ဆိုတဲ့ စကားခံပြီး ... မွေးမှာက အမွှာ၊ ပြီးတော့ ယောက်ျားလေးတွေ ဆိုတော့ နည်းနည်းအလုပ်များမယ်ဗျာ။ဒါကြောင့် ကျနော် ငြင်းရတာပါဗျာလို့ ပြောလိုက်ရတယ်။ (ခလေး ခလေး ခလေး နဲ့ ... ခလေး အကြောင်းပြလို့ကောင်းတာ အခုမှ နည်းနည်းသိလာတော့တယ်း) ) နောက်တခုက ကျနော့်တပည့်မလေးတွေရဲ့ နှုတ်ဆက်ပွဲ။ သူတို့က ကျနော်တို့နေတဲ့မြို့ကနေ တခြားမြို့တွေမှာ ပညာသွားသင် ကျောင်းသွားတက်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ ကျနော်တို့ဇနီးမောင်နှံ ကိုဖိတ် တယ်။ ဆရာ လာဖြစ်အောင် လာခဲ့နော် အန်တီမျိုးကိုလည်းခေါ်ခဲ့ပါတဲ့။ .. ခလေးတွေကို ခေါ်လာလို့ မရဘူး လားလို့ ကျနော်ပြန်မေးကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ကလည်း ခေသူမဟုတ်တွေ။ ချက်ဆို နားခွက်မီးတောက်တာ လေးတွေဆိုတော့ ... ဆရာ အန်တီမျိုးဗိုက်ထဲက ထုတ်ထားခဲ့လို့ရရင် ထားခဲ့လေ ခေါ်မလာနဲ့တဲ့။း) အဲဒီမှာ သူတို့ကို ပညာရေးကိစ္စတွေ၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စာမေးပွဲစနစ်အကြောင်းတွေ၊ ကျောင်းသားတ၀က်ခ နဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအကြောင်း စာအုပ်စာရေးကိရိယာ လျော့ဈေးအကြောင်းတွေ၊ ပြီးတော့ အင်တာနက်ခေတ်၊ သမီးတို့ ကျောင်းစာတွေ နားမလည်တာရှိရင် ဆရာ့ဆီ အီးမေးနဲ့ပို့ ဆရာကူတွက်ပေးမယ်၊ ကူလုပ်ပေးမယ် ဆိုတော့ ရယ်နေကြတယ်။ သူတို့အကြိုက်ပဲလေ။ သူတို့ကို ကျနော် စာသင်ပေးတုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ ပုစ္ဆာတွေ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တွက်ကြဆိုပြီး whiteboard ပေါ် ကျနော် မေးခွန်းတွေ ရေးချလိုက်ရင် ၀ိုင်းအော်ပြီ။ ဆရာ .........တဲ့။ အသံရှည်ကြီးနဲ့။ သူတို့တွေရဲ့ အသံတွေကို ကျနော် မကြားရတော့ပေမယ့် သူတို့တွေ ဝေးဝေးမြင့်မြင့် ပျံနိုင်ကုန်ကြတဲ့အတွက် ကျနော် ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်။ ကူအိုပီအို ကျောင်းသားသမဂ္ဂက ဖိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတော့ မဖြစ်မနေသွားရမယ်။ သူတို့က ဗမာနိုင်ငံသား ဒုက္ခသည်တယောက်၊ သူတို့နိုင်ငံမှာလာရောက်ခိုလှုံနေထိုင်နေတယ်၊ သူတို့ ဆီမှာပဲ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၄ နှစ်အတွင်းမှာပဲ သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ ရယူသွားနိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်၊ ပြီးတော့ သူတို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ (သူတို့အမြင်ပေါ့ဗျား) အဲဒီလို ကောင်းမွန်တဲ့အချက်အလက်တွေကြောင့် ဖိတ်ခေါ်တာပါတဲ့။ ၈ လေးလုံး နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတော့ ၈ လေးလုံးအကြောင်း message တခု ထည့်ပြီး ဟောပြောမယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ နောက်တခုက မခေါ်ပဲလာ မနှင်ပဲ ပြန် ဆိုသလိုပဲ။ တနေ့က ကျနော့် မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ယောက်ခမ ကွယ်လွန်သွား တယ်။ သူကလည်း အရင်လိုပဲ ကျနော် အလုပ်များနေတတ်တယ် ထင်ပြီး အားနာလို့ ကျနော့်ကို မပြောဘူး။ မပြောတော့ ကျနော်လည်း မသိဘူး။ နောက်တရက်မှ တခြားမိတ်ဆွေ တယောက် ကနေတဆင့်သိရတော့ ကျနော်မနေနိုင်ဘူး၊ ကျနော်ဖုံးဆက်တယ်။ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဘာအကူအညီပေးရမလဲ ကူညီမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ အဲဒါ ကျနော်က ဖုံးဆက်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။ ကျနော် နားလည်ထားတဲ့ မိတ်ဆွေဆိုတာ အကူအညီလိုမှ ရစရာရှိမှ ဖုံးဆက်တတ်တာမျိုးကို ကျနော်က မိတ်ဆွေလို့ သဘောမထားဘူး။ အဲဒါ သာပေါင်းညာစားစိတ်။ အဲဒါမျိုးက မထားသင့်မထားအပ်တဲ့ တကိုယ်ကောင်းစိတ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်ပဲ ဖုန်းဆက်ပြီး ၀မ်းနည်းကြောင်းပြောပြ၊ လိုတဲ့ ဟင်းချက်ဖို့အိုးကြီးတလုံး ယူသွားပြီးသွားပို့၊ မိတ်ဆွေရဲ့ ဇနီး နဲ့ ယောက်ဖ (ကျန်ရစ်သူ သမီး နဲ့ သား)ကိုလည်း အားပေးနှစ်သိမ့်ပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ နည်းနည်းပါးပါးဝိုင်းကူပြီး သူပေးလိုက်တဲ့ ၈ လေးလုံး အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားဖိတ်စာလေးယူပြီး သူတို့ မနှင်ပဲ ပြန်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီ ၈ လေးလုံး အခမ်းအနားတော့ မလုပ်ဖြစ်ဘူးတဲ့။ အခန်းမရလို့ ဆိုလားပဲ။ ဖိတ်စာတော့ စကင်ဖတ်ပြီး ဖေ့ဘုတ် ဒိုင်ယာရီထဲမှာ ကျနော် သိမ်းထားလိုက်တယ်။ အမှတ်တရပေါ့။ ဒီလထဲ ဖိတ်ကြားခံရပြီး တက်စရာ(သွားစရာ) မလိုတဲ့ အခမ်းအနားတခုပေါ့ဗျာ။ ဖိတ်စာကို ဒီမှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4348788476396&set=a.4348787996384.2179135.1188115126&type=1&theater နောက်တခုက ခုနက ကျနော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေ ဆိုတဲ့ ကိစ္စအပေါ် ကျနော့်သဘောထားပေါ့ဗျာ။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောရရင် ဒဿနအမြင်ပေါ့ဗျာ။ ဟဲဟဲ။ ဒဿနအမြင်ဆိုလို့ မှတ်မှတ်ရရ တခုရှိတယ်။ ကျနော် ဒဂုံတက္ကသိုလ် မှာ စိတ်ပညာအဓိကနဲ့ကျောင်းတက်နေတော့ ကျနော်တို့ စိတ်ပညာဌာန ရဲ့ ဘေးခြင်းကပ်မှာက ဒဿနိကဗေဒ ဌာနရှိတယ်။ မျက်နှာခြင်းဆိုင်မှာက ဥပဒေဌာန(Law) ရှိတယ်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားအချင်းချင်းဆိုတော့ တဦးနဲ့တဦး စကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ကို အဲဒီ ဌာနတွေက ကောင်မလေးတွေက ကျနော်တို့ကိုမြင်ရင် ဟေး နေမြင့်ပြီနော် .. ဆေးသောက်ပြီးပလား ... မမေ့နေနဲ့ ... ပုလင်းလှုပ်သောက်နော် နဲ့ စတတ်တယ်။ ကျနော်တို့စိတ်မဆိုးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီအတိုင်းတော့ ငြိမ်နေလို့ မရဘူး နည်းနည်းတော့ ပညာပြန်ပေးရမယ်လို့ သူငယ်ချင်းအားလုံးသဘောညီညွတ်ကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ ဥပဒေ (Law) က မိန်းခလေးတွေတွေ့ပြီဆိုရင် ကျနော်တို့က လက်ဦးမှုယူပြီး အော်တော့တာပဲ ... လော ... လော .... ဘာလောလဲ ..... အီးဘောလော ... အီးဘောလော ..။ အဲဒီကတည်းကစပြီး Law က ကျနော်တို့ကို စစ နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ငြိမ်သွားရောပဲ။း) ဒဿနိက ဌာနက လူတွေကို ကျနော်တို့က ဘယ်လိုပြန်စသလဲဆိုတော့ ဒဿဂီရိဘီလူး မယ်သီတာကို မရလို့ ညစ်တွန်းတွန်းပြီး တောထဲဝင်၊ တောထဲမှာ အ၀တ်အစားတွေချွတ်ပြီး ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ကတယ်ပေါ့ဗျာ. ... ဟေး.. ဒဿ .. မယ်သီတာကို မရ..... တောထဲမှာ နိက ... လို့ အော်တော့ ဒဿနိက ဌာနက ကျောင်းသူလေး တွေ ရှက်လို့ ပြေးရောပဲး)။ ခုနက မိတ်ဆွေဆိုတဲ့အမြင်ကို စကားပြန်ဆက်တော့မယ်ဗျာ၊ မိတ်ဆွေဆိုတာ ခုနက ကျနော်ပြောသလို လိုချင်တာရှိမှ၊ အကူအညီလိုမှ သတိရတာ ဆက်သွယ်တတ်တာမျိုးကို မိတ်ဆွေ လို့မခေါ်ဘူးဆိုတဲ့စကား။ အဲဒါ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တနေ့က ကျနော် နာရေးကိစ္စနဲ့ အပြင်သွားနေတုန်း အိမ်ကို ကျနော်တို့မိတ်ဆွေမိသားစုတစု လာသွားကြတယ်။ သူတို့ ကိုယ်တိုင်တောထဲမှာ ပင်ပင်ပမ်းပမ်း ရှာဖွေပြီး သူတို့ ကိုယ်တိုင်သေသေချာချာ လုပ်ထားတဲ့ blueberry ဖျော်ရည်တွေ ကျနော့်ဇနီးကို ပေးသွား ကြတယ်။ ကျနော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကျနော့်ဇနီး ပြောပြတာနဲ့ အဲဒီဖျော်ရည်သောက်ပြီး သူတို့မိသားစု အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတွေ တောင်းပေးလိုက်တယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း မိတ်ဆွေတယောက်က သူ့အိမ်မှာ ကွတ်သီယို လုပ်စားတယ်။ အဲဒါ ကျနော့်ဇနီးကို သူတို့မိသားစုက သတိရကြတယ်။ မဗိုက်တော့ စားချင် မှာပဲဆိုပြီး ဖုန်းဆက်ကြတယ်။ .... အစားကောင်းစားရရင် မိတ်ဆွေကို သတိရတတ်ကြတယ် ဆိုတဲ့ စကား အတိုင်းပေါ့ဗျာ။ သူတို့တွေရဲ့ အခုလို အမှတ်တရ ရှိတာလေးတွေက မိတ်ဆွေ ဆိုတာကိုဖော်ပြတာပါပဲ။ မိတ်ဆွေဆိုတာ သူငယ်ချင်းပါပဲ။ တလောက ကျနော့်မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတယ်။ စေတနာစကားပါ။ သူပြောတာက ... ကျနော်က ပွင့်လင်းတယ်၊ ရိုးသားတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ချစ်ခင်တဲ့သူရှိသလို မလိုမုန်းတီးတဲ့လူလည်းရှိတယ်တဲ့။ ကျနော်ကလည်း ကျနော်အမြင်ပေါ့ဗျာ။ပြန်ဆွေးနွေးတယ်။ လူချစ်လူခင်များဖို့ မလိုပါဘူးဗျာလို့။ ပြီးတော့ အကုန်လုံးနဲ့လည်း တည့်အောင်ပေါင်းဖို့မလိုပါဘူးလို့။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ သန်းခြောက်ထောင်ကျော် ရှိတယ်ဗျာ။ အကုန်လုံးနဲ့ တည့်အောင် လိုက်ပေါင်းနေရရင် ပျင်းစရာကြီး။ တော်ပြီပေါ့ဗျာ ကိုယ်နဲ့ တည့်တဲ့လူ ၃ - ၄ - ၅ ယောက်လောက်ရှိရင် ဖြစ်ပါတယ်လို့။း) ခေတ္တနားပါဦးမည်။ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ခွပ်တဲ့ဒေါင်းမှ ခွပ်ဒေါင်းဖြစ်မယ် .... ဖွတ်နဲ့ပေါင်းရင် ဖွတ်ဒေါင်းဖြစ်မယ်။ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Posted by
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေအား ဒုတိယသမတအဖြစ် အဆိုတင်သွင်းထားမှုကို ထပ်မံကန့် ကွက်ပါတယ်။
နစ်နေမန်း facebook ကနေ ကူးယူလာပြီး ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်စု ရေးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုင်ပြီး သူ့အရိုးနဲ့သူ့ပြန်ထိုးသလို ထောက်ပြဝေဖန်တဲ့သဘောမဟုတ်ပါ။ (၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဘယ်တုန်းကမှ မထောက်ခံခဲ့သလို ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း လက်မခံခဲ့ပါ။) စစ်အုပ်စုပြောနေတဲ့ ဥပဒေရဲ့အထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိရေးတို့၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီတို့ဆိုတဲ့စကားတွေခဏခဏ ကြားကြားနေရတော့ အခုလို ရှေ့ နောက်မညီ ကိုယ်ယိုတဲ့ချေး ကိုယ်ပြန်ကောက်စားနေသလိုဖြစ်နေတာကြီးကိုယိုသူမရှက် မြင်သူရှက်ဆိုရိုးစကားအတိုင်း အမြင်မတော် ဝေဖန်တဲ့သဘောနဲ့ ထပ်ဆင့် ဖြန့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့်သားဆွေ--------ဒုတိယသမတအဖြစ် အဆိုတင်သွင်း လျာထားခံထားရတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေရဲ့သားဖြစ်သူ တာရာမြင့်ဆွေဟာလည်း သြစတြေလျနိုင်ငံသား ဖြစ်နေပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေအား ဒုတိယသမတအဖြစ် အဆိုတင်သွင်းထားမှုကို ထပ်မံကန့် ကွက်ပါတယ်။ထပ်မံကန့် ကွက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေရဲ့သားဖြစ်သူ တာရာမြင့်ဆွေဟာလည်း သြစတြေလျနိုင်ငံသား ခံယူထားသူ ဖြစ်နေကြောင်း ထပ်မံသိရှိရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေရဲ့သားဖြစ်သူ တာရာမြင့်ဆွေဟာ သြစတြေလျနိုင်ငံသားခံယူထားသူ သူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကို လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးတဲ့နောက်မှာ သူကိုယ်တိုင်လည်း သြစတြေလျနိုင်ငံသား ခံယူခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေရဲ့သားဖြစ်သူ တာရာမြင့်ဆွေရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ (ဒေါက်တာမြင့်ဆွေနှင့် ဒေါ်ခင်သန်းဝင်းတို့ ၏ သမီးဖြစ်သူ) ဟာ သြစတြေလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့ (Fairfield City, Syndey, New South Wales State, Australia) မှာ နေထိုင်ကြပြီး၊ သူမဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၂) နှစ်ခန့် ကကတည်းက ဖီဂျီနိုင်ငံ (Fiji) ကနေ သြစတြေလျနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားခံယူပြီး ဆစ်ဒနီမြို့ သို့ရွှေ့ ပြောင်းအခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေအား ဒုတိယသမတအဖြစ် အဆိုတင်သွင်းထားမှုဟာ ဒုတိယသမတဖြစ်ဖို့လက်ရှိသတ်မှတ်ချက်များနဲ့ညှိစွန်းနေတာကြောင့် ထပ်မံကန့် ကွက်ပါတယ်။ https://www.facebook.com/Niknayman ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ခွပ်တဲ့ဒေါင်းမှ ခွပ်ဒေါင်းဖြစ်မယ် .... ဖွတ်နဲ့ပေါင်းရင် ဖွတ်ဒေါင်းဖြစ်မယ်။------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Posted by
ကြားဖူးမယ်ကြမယ် ထင်ပါတယ်. ...... စစ်တပ်က တိုက်ကြက်ကြီး (တပ်ကြပ်ကြီး)တယောက်က မုဒိမ်းကျင့်လိုက်လို့ အကျင့်ခံရတဲ့ တိုင်းရင်းသူလေးရဲ့ အဖေက တပ်ထဲက အရာရှိကို သွားတိုင်တယ်။ အရာရှိက .. ကဲ ဒါဆို အဲဒီလုပ်တဲ့ကောင်ကို မုဒိမ်းမှုနဲ့ဖွင့်ပြီး အရေးယူလိုက်မယ်လို့ပြောတော့ ကလေးမလေးရဲ့ အဖေက ... ဒီမယ် ဗိုလ်ကြီး ... ဒီလိုတော့ အမှုပေါ့အောင် မလုပ်ပါနဲ့ .... ကျနော့်သမီးကိစ္စက -ိုးမှုပါ ... -ိုး မှုကို မုဒိမ်းမှုဆိုပြီး အမှုပေါ့အောင် မလုပ်ပါနဲ့ -ိုးမှု အနေနဲ့ အရေးယူပေးပါ ဆိုသလိုပဲ ..... အခုဟာက မှုဒိမ်းမှုကို အရင်းပြုပြီး ကြားထဲက ကွက်ကျော်ရိုက်အမြတ်ထုတ်ဖို့ စစ်အုပ်စုက ဂွင်ဆင်တာပါ။ အစိုးရ သတင်းဌာနတွေကနေ မှုဒိမ်းမှုကို ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ခေါင်းစဉ်တွေတပ်ပြီး သတင်းကြေညာသွားခဲ့တာတွေ၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အရေးမယူပဲ ထားခဲ့တာတွေ၊ အရေးယူဖို့ နိုင်ငံရေးနည်းအရ တောင်းဆိုလာတဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေကို ရဲက သေနတ်နဲ့ အချက် ၄၀ ပစ်ခတ်ခဲ့တာတွေ၊ အဝေးပြေးကားကိုတားပြီး မူစလင်ကုလားတွေကို သတ်ပစ်ခဲ့တာတွေ၊ ဒီလူသတ်မှုကိုလည်း အရေးမယူပဲ ထားခဲ့တာတွေ။ ကုလားတွေ မကြေမနပ်ဖြစ်ပြီး စုဝေးလာစေခဲ့တာတွေ၊ စုဝေးလာတဲ့အခါမှာ ရခိုင်တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့လာတော့ နယ်မြေခံတပ်အင်အားမလုံလောက်လို့ပါ အကျဉ်းစခန်းက ရဲတပ်ဖွဲ့လောက်ပဲ ရှိလို့ပါဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ အခြေအနေပိုဆိုးလာအောင်လုပ်ခဲ့တာတွေ၊ အခြေအနေပိုဆိုးလာအောင် သမ္မတရုံး ညွန်မှူး မူးဇော်က ဆွပေးခဲ့တာတွေ(အခုတော့ သူရေးတာတွေ ပြန်ဖြုတ်သွားပါပြီ)၊ အဓိကရုဏ်းကို ထိမ်းသိမ်းဖို့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ပဋိပက္ခမဖြစ်အောင် ၀င်ရောက်တားဆီးပေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကို ကုလားဖက်ပါသူတွေလို့စွပ်စွဲပြီး ရခိုင်တွေနဲ့ရန်တိုက်ပေးတာတွေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပါ ပုတ်ခတ် စွပ်စွဲ စော်ကားလာတာတွေ၊ (တခွန်းတည်းနဲ့ပြောရရင် အတိုက်အခံတွေကို ဒီပွဲမှာ ပြည်သူနဲ့ အပြတ် ရန်တိုက်သွေးခွဲဖို့ကျိုးစားလာတာတွေ)၊ စစ်တပ် နဲ့ စစ်တပ်မကင်းရာမကင်းကြောင်းတွေက နာမည်ကောင်း ယူဖို့ကျိုးစားတာတွေ ဒါတွေအားလုံးဟာ အကြောင်း အကျိုး ဆက်စပ်မှုတွေပဲလို့ ကျနော် တင်ပြချင်တယ်ဗျာ။------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ခွပ်တဲ့ဒေါင်းမှ ခွပ်ဒေါင်းဖြစ်မယ် .... ဖွတ်နဲ့ပေါင်းရင် ဖွတ်ဒေါင်းဖြစ်မယ်။------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Posted by
စစ်အုပ်စု က နိုင်ငံရေးကို အခြားနည်းနဲ့ ဆက်လုပ်နေပြီလား
Facebook ပေါ်မှာ ပွနေတဲ့သတင်းတွေ အားလုံးခြုံငုံစုစည်းကြည့်လိုက်တော့ - ကုလားတွေက ရခိုင်တွေကို သတ်နေပြီ ဆိုတဲ့သတင်း- ဘူးသီးတောင် မောင်းတော ဖက်မှာ ညအချိန် အကြမ်းဖက်သမားများ အုပ်စုဖွဲ့ သောင်းကျန်းနေလို့ မိမိတို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက ပစ်ခတ်နေရတဲ့သတင်း - ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားပြီဆိုတဲ့သတင်း- ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်က ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်တွေ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး ဗမာပြည်ထဲ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်း- ဒီသတင်းတွေကို မိမိတို့ တပ်မတော်မှ ကြိုတင်သတင်းရရှိတဲ့အတွက် အပြီးတိုင် ချေမှုန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း - ပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်ပရောက် မြန်မာများ သွားလာနေထိုင်မှု သတိရှိကြဖို့နဲ့ အရေးအကြောင်းရှိလာရင် မြန်မာသံရုံးတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ အကြောင်းကြားကြဖို့ တိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းစသဖြင့် သတင်းတွေတွေ့နေရတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်တစားဖတ်ကြည့်မိပါတယ်။ သတင်းတွေရဲ့ လားရာ (ဦးတည်ချက်) ကို ကြည့်လိုက်တော့ သတင်းရေးသားဖော်ပြချက်တွေအရကုလား - ဗမာ အဓိကရုဏ်းကို ကြီးသထက်ကြီးအောင်၊ ကုလား - ဗမာ အဓိကရုဏ်းကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် - ဗမာ စစ်ပွဲဖြစ်အောင်၊ ငယ်တဲ့အမှု ကြီးအောင်၊ ကြီးတဲ့အမှု ရှင်းမရအောင် လုပ်နေတဲ့ သဘောဖြစ်နေတာ သတိထားမိပါတယ်။ သတင်းတွေရဲ့ လာရာ (အရင်းအမြစ်)ကို ကြည့်လိုက်တော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ၎င်း၏ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားကြောင်း messenger သတင်းဂျာနယ်က ဖော်ပြပေးထားတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးက ထစ်ခနဲဆို ကုလားကို မုန်းတတ်တယ်၊ မဲတတ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နယ်ချဲ့  လက်အောက်မှာ နေခဲ့ရတာခြင်းအတူတူ ဗမာ က ကုလား (အိန္ဒိယ) ထက် ပိုပြီး နိမ့်ကျခဲ့ရတယ်။ ကျွန်ခြင်းအတူတူတောင် တဆင့်နိမ့်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်သဘောက် (ကျွန်ရဲ့ ကျွန်) ဖြစ်ခဲ့ရလို့ပဲ။ ဒါကြောင့် ကုလား မုန်းတီးရေး အခံက မြန်မာလူမျိုး အတော်များများမှာ မသိမသာဖြစ်စေ သိသိသာသာဖြစ်စေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီအခြေခံ စိတ်သဘောသဘာဝ အားနည်းချက်က အမြတ်ထုတ်ရတာလွယ်ပါတယ်။ လူမျိုးရေး - ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတွေကို ဖန်တီးတတ်တာဟာ နယ်ချဲ့ သမားနဲ့ လက်ယျာအချောင်သမားတွေရဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကလော့စ်ဝစ်ဇ် ပြောတာက စစ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေးကို အခြားနည်းနဲ့ ဆက်လုပ်တာပဲတဲ့။ကျနော်တို့အားလုံး စဉ်းစားရမှာက အခု ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ မငြိမ်မသက်မှုတွေအားလုံးစစ်အုပ်စု က နိုင်ငံရေးကို အခြားနည်းနဲ့ ဆက်လုပ်နေပြီလား ....... အဲဒါကို ကျနော်တို့ အလေးအနက်စဉ်းစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ သားဆွေ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ခွပ်တဲ့ဒေါင်းမှ ခွပ်ဒေါင်းဖြစ်မယ် .... ဖွတ်နဲ့ပေါင်းရင် ဖွတ်ဒေါင်းဖြစ်မယ်။ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Posted by
- ရဲစခန်းတွေမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ငါသေမှ လက်နက်ရမည် ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ဖြုတ်ပေးပါ။ - ပြည်သူ့ရဲများသည် ပြည်သူကို မိဘသဖွယ် စောင့်ရှောက် ဆက်ဆံပါမည်ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ တပ်ပေးပါ။ - စစ်တွေမှာ လူအုပ်ထဲ သေနတ်နဲ့ပစ်ဖို့ ပစ်မိန့်ပေးသူတွေနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ရဲတွေကို ဥပဒေ အရ အရေးယူပေးပါ။------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ခွပ်တဲ့ဒေါင်းမှ ခွပ်ဒေါင်းဖြစ်မယ် .... ဖွတ်နဲ့ပေါင်းရင် ဖွတ်ဒေါင်းဖြစ်မယ်။------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Posted by
စစ်အုပ်စု အကောက်ကြံနေပြီ။ သတိရှိကြ။
စစ်အုပ်စု အကောက်ကြံနေပြီ။ သတိရှိကြ။ တပြည်လုံး ပျံ့ နှံ့လာနေပြီဖြစ်တဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ရေ/မီး ရရှိရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ အလုပ်သမားတွေရဲ့ လုပ်ခလစာနဲ့ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတိုက်ပွဲတွေ လယ်သမားတွေရဲ့ လယ်ယာမြေအသိမ်းခံရလို့ ဆန္ဒပြတိုက်ပွဲဝင်နေတာတွေ ကျောင်းသားထုရဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ ကို ..... မှေးမှိန် သေးသိမ်သွားစေလို့ တဲ့ သဘော ဟန့်တားလိုတဲ့သဘော အင်အားသုံး ဖြေရှင်းဖို့ အကြောင်းပြချက် ရှာလိုတဲ့သဘောနဲ့ ကုလား - ဗမာ အဓိကရုဏ်းကို စစ်အုပ်စု ဖန်တီး ဖော်ထုတ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၆ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကို အာရုံလွှဲပြောင်းဖို့ ရန်ကုန်မှာ စစ်အုပ်စု ကုလား ဗမာ အဓိကရုဏ်း ဖန်တီးခဲ့ဖူးပါတယ်။ (သတိပြုကြပါ)။
ကိုအေးအောင်လွတ်မြောက်ရန်တောင်းဆိုမှု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ ပေးပို့လွှာ
အသက်(၂၀) အရွယ်ရှိတဲ့ ဒုတိယနှစ်ရူပဗေဒကျောင်းသား (ကိုအေးအောင်)ကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ..နအဖ စစ်အာဏာရှင်တွေကအညိုးတကြီးနဲ့ မတရားချလိုက်တဲ့ ထောင်ဒဏ်က (၅၉) နှစ်တဲ့ ဗျာ.ဘယ်ဥပဒေစာအုပ်မှာမှမရှိတဲ့ ထောင်ဒဏ်ပါ....ကြားလို့ကောင်းကြသေးရဲ့လား.. ယ္ခု ကိုအေးအောင်ဟာ ကလေးထောင်မှာပါ..သူ့ရဲ့ မိဘတွေမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက် ကိုအေးအောင်အတွက်ပူဆွေးသောကရောက်နေပါတယ်...ကိုအေးအောင် နဲ့ လက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်ဖို့တာဝန်သိစွာနဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူအပေါင်းနဲ့ မိဘပြည်သူအားလုံး.. ၀ိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးကြပါခင်ဗျာ... ကိုအေးအောင်၏ မိသားစုဝင်များ--------- ကိုအေးအောင်လွတ်မြောက်ရန်တောင်းဆိုမှု ကိုအေးအောင်နှင့် ကျန်ရှိနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား များ ခြွင်းချက်မရှိ အမြန်လွတ်မြောက်ရန်အတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ ပေးပို့လွှာ (၁) ကိုအေးအောင်ကို လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုမှုပုံပါသည့် T Shirt ကျန်ရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုမှုပုံပါသည့် T Shirtကိုအေးအောင်လွတ်မြောက်ရန် လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုသူများ (၁)ကိုအေးအောင်လွတ်မြောက်ရန် လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုသူများ (၂) ကိုအေးအောင်လွတ်မြောက်ရန် လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုသူများ (၃)ကိုအေးအောင်လွတ်မြောက်ရန် လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုသူများ (၄)ကိုအေးအောင်လွတ်မြောက်ရန် လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုသူများ (၅) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ခွပ်တဲ့ဒေါင်းမှ ခွပ်ဒေါင်းဖြစ်မယ် .... ဖွတ်နဲ့ပေါင်းရင် ဖွတ်ဒေါင်းဖြစ်မယ်။ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Posted by
ကိုဗဟိန်းရွာပြန်ကောက်စိုက်ပုံ ဂျပန်ခေတ်မှာ နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးတဲ့ …..သခင်ဗဟိန်း ပျောက်သွားဘူးတယ်ဂျပန်ကှိ မယုံတာဂျပန်ကို ယုံနေတဲ့လူတွေကို ရွံတာဂျပန်ကိုတော်လှန်ဖို့ ပြင်ဆင်ချင်တာ အဲဒီမှာ ကိုဗဟိန်း ရွာုပြန်သွားတာပဲ။အချိန်ကာလကြီးက ခေတ်ပျက်ကြီးကိုး ….အင်္ဂလိပ်အပြေး၊ ဂျပန်အ၀င်၊ ဘီအိုင်အေ အထ ဆိုတော့၊အားလုံးက အရှေ့အာရှတိုက်သားများ သာတူညီမျှပေါ့၊ဆိုတော့စိန်ကြည် တွေများတယ်။ မာစတာကြီးကလည်း တိုကျိုမပြန်ညိုထွန်းတို့ကလည်း မိဂဒါဝုန် ကိုသွားတုန်း၊စစ်ကိုင်းတံတားမှာတော့ ခေါင်းတွေပြတ်လို့၊ဂျပန်တော်လှန်ရေးက လှော်တက်တချောင်းနဲ့ချောင်းကြိုချောင်းကြား မြောင်းကြိုမြောင်းကြားမှာ။ ဟုတ်လည်းဟုတ်တာပဲ …မာစတာကြီးလည်းကြောက်ရစိန်ကြည်လည်းကြောက်ရစိန်ကြည့် ယောက်ဖလည်းကြောက်ရရှိရှိသမျှ အာရှ၊ အာဖရိက၊ လက်တင်အမေရိက စိန်ကြည်တွေက မာစတာတွေကို ဂုဏ်ပြုနေကြတော့ချွေးတပ်ဗိုလ်တော့ ဘယ်လုပ်တော့မလဲ၊ ရွာပြန်ကောက်စိုက်တော့ မပေါ့။တမိုးသောက်ပြန်တော့လယ်တဲကွန်ဂရက်လည်း ပြီးမြောက်ညိုထွန်းတို့လည်း မိဂဒါဝုန်ရောက်တော့ရဲခေါင် ရဲခေါင် တဲ့ဂျပန်ကို ဖင်စလန်းလန်အောင် ချပစ်တဲ့ ပြောက်ကျားအဲဒါ …ဘွားခနဲပေါ်လာတဲ့ ကိုဗဟိန်းရဲ့ ပြောက်ကျား ပြည်သူ့ရဲခေါင်ပြောက်ကျား။ (သားဆွေ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ခွပ်တဲ့ဒေါင်းမှ ခွပ်ဒေါင်းဖြစ်မယ် .... ဖွတ်နဲ့ပေါင်းရင် ဖွတ်ဒေါင်းဖြစ်မယ်။ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Posted by
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်မယ်ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို စပြင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘယ်ဟာကိုပြင်မှာလဲ?လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ထောက်ခံရမယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပြင်ဆင်မှာလဲ ?လွှတ်တော်ရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ထောက်ခံရမယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးဆွဲခဲ့တာကနေစပြီး စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံက ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကတည်းက အမျိုးသားညီလာခံ တံဆိပ်တပ်ပြီး ဆွဲလာခဲ့တာ။ အမျိုးသားညီလာခံ ဆိုတာကလည်း ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကွင်းလုံးကျွတ် အနိုင်ရခဲ့တဲ့ NLD ကို အာဏာလွှဲမပေးချင်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစား တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်မျိုးလုပ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံရေးခိုင်းတာပဲ။ ဖွဲ့စည်းပုံရေးတော့ ပြည်သူလူထုဆန္ဒ၊ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ဆန္ဒ မပါခဲ့ဘူး။ ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူတရပ်လုံး နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားထဲကပဲ စစ်အုပ်စုက ဖွဲ့စည်းပုံကို သူ့လူနဲ့သူ ရေးဆွဲခဲ့တယ်။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် (လွှတ်တော်အမတ်) တမတ်သားတောင် မပါခဲ့ဘူး။ အဲဒီလို လွှတ်တော်အမတ် တမတ်သား (၄ ပုံ ၁ ပုံ) တောင် မပါပဲ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ (တနည်းအားဖြင့်) ဒီမိုကရေစီနည်းမကျတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ဖို့ လွှတ်တော်အမတ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျော် ထောက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ ပြဌာန်းချက်က ရယ်စရာကောင်းမနေဘူးလား။ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် (၄ ပုံ ၃ ပုံ) ထောက်ခံရမယ် ဆိုတဲ့ ပြဌာန်းချက်က ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်လို့မရအောင် ခက်ခဲအောင် မူလီကြပ်ထားတာပဲ။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။ တခြားဟာတွေထက်ကို ပိုခက်တယ်။ ဒါပေမယ့် နအဖ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံလောက်တော့ မခက်ဘူး။ ကျနော့်အမြင်က ဖွဲ့စည်းပုံမှာပြဌာန်းထားတဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် (၄ ပုံ ၃ ပုံ) ကို (၃ ပုံ ၂ ပုံ) နဲ့ အစားထိုး ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ လူတရာမှာ ၄ ပုံ ၃ ပုံ ဆိုရင် ၇၅ ယောက်ဖြစ်မယ်၊ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ဆိုရင် ၆၆ ယောက်ဖြစ်တယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ ၇၅ ယောက်မလိုပါဘူး၊ ၆၆ ယောက် ဆိုရင် ဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ဝက်ကျော်နေတာပဲ။ ဒုတိယအဆင့် ဖြစ်တဲ့ - တပြည်လုံးဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ပြီး ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူတွေရဲ့ ထက်ဝက်ကျော်က ထောက်ခံ ရမယ် ဆိုတဲ့ ပြဌာန်းချက်ကိုတော့ ကန့်ကွက်စရာမရှိပါ။ နိုင်ငံရေးအာဏာဟာ ပြည်သူလူထုထံက ဆင်းသက် တယ်ဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီအခြေခံသဘောအရ အာဏာဆိုတာ ပြည်သူလူထုရဲ့ လက်ထဲမှာရှိကိုရှိရမှာဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတခုရဲ့ ကောင်းမှု/ဆိုးမှုကို သူ့နိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူလူထုကပဲ ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဆန္ဒခံယူပွဲ ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီအခြေခံမူအရ လက်မခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ သို့သော် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ပိုင်းမှာ ၂၀၀၈ မှာ လုပ်သွားသလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ နဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်း ကျကျ လုပ်သွားဖို့ပဲလိုတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ထပ်ပြီး ဖြည့်စွက်ရမှာက ပြည်သူလူထုလက်ထဲ အာဏာခွဲဝေပေးတဲ့အချက်၊ အဲဒါက ဘာဖြစ်သင့်လဲဆိုတော့ ဆန္ဒသဘောထားတခုကို မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၅ သိန်းပြည့်ခဲ့ရင် လွှတ်တော်ကို တိုက်ရိုက်တင်သွင်းနိုင်တယ်၊ လွှတ်တော်က ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ (သားဆွေ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ခွပ်တဲ့ဒေါင်းမှ ခွပ်ဒေါင်းဖြစ်မယ် .... ဖွတ်နဲ့ပေါင်းရင် ဖွတ်ဒေါင်းဖြစ်မယ်။ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Posted by
သင်္ကြန်နဲ့ဝေးနေခဲ့တာတော့ကြာပါပြီ။ သင်္ကြန်ကိုလွမ်းသလားဆိုတော့ ဒီလောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သင်္ကြန် မတိုင်ခင် သူငယ်ချင်းတွေ လူစုမယ်၊ သန်လျှင်ဖက်က ဂျစ်ကားကောင်းကောင်းတစီး ကြိုတင် ငှားမယ်၊ ပြီးရင် သင်္ကြန်တွင်းမှာ ရေပက်ခံထွက်မယ်။ (သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်ပတ်တာလည်း လည်ပတ်သလို အဆင်ပြေ မယ့်တရက်ရက်ကို ဆွေမျိုးညီအကိုမောင်နှမတွေနဲ့လည်းရေပက်ခံ ထွက်လည်ပေးရမယ်။) နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ ကန်တော်ကြီးမှာ ငါးသွားလွှတ်မယ်၊ ရွှေတိဂုံဘုရားသွားမယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ နှစ်တိုင်းလုပ်နေကြဆိုတော့ သိပ် မလွမ်းလှဘူး။ ရေပက်ခံထွက်ရတာလည်း ပျင်းဖို့ကောင်းတယ်။ ကိုယ်ကချည်းခံနေရတာ၊ ခေါင်းမဖော်နိုင်ဘူး၊ ဘယ်ကမှန်းမသိ ရေဘော်လုံးနဲ့ထုတာ၊ မီးသတ်ပိုက်နဲ့ထိုးတာ၊ ခွက်စောင်းခုတ်တာ၊ ဒီကြားထဲ လစ်ပြီထင်ပြီး ကိုယ့်ဖိနပ်လာဆွဲချွတ်လို့ ဆောင့်ကန်ထုတ်ရတာ၊ ၀ါရှာဟေ့ ၀ါရှာ ဆိုတဲ့ ညာသံပေးတာတွေကြောင့် ကိုယ့် မိန်းခလေးသူငယ်ချင်းတွေ၊ အမတွေ နှမတွေကို ဟိုနှိုက်သည်နှိုက်ရန် က ကာကွယ်ပေးရတာ။ အခြေအနေ မကောင်းရင် ရန်ပွဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာ၊ ဒါတွေပဲ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်္ကြန်လည်ပတ်မှုကို သိပ်တော့ မလွမ်းလှဘူး။သင်္ကြန်ကို အင်မတန်လွမ်းတာရှိတယ်။ အဲဒါက ညဖက်ဆိုအလှကားတွေကြည့်ရတာ၊ သံချပ်အဖွဲ့တွေ ဆုပေးမဏ္ဍပ်တွေ မှာ အပြိုင်အဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်ကြတာတွေကို ကြည့်ခဲ့ရတာတွေကိုတော့ လွမ်းတယ်ဗျာ။ သံချပ်တွေကလည်း ပြောင်မြောက် သလားမမေးနဲ့၊ ခေတ်နဲ့စနစ်ကို ထင်ဟပ်တဲ့သရော်လှောင်ပြောင်ချက်တွေနဲ့။ ဘယ်သံချပ်အဖွဲ့တော့ အပိတ်ခံလိုက်ရပြီ။ ဘယ်အဖွဲ့တော့ ဖမ်းခံလိုက်ရပြီ၊ နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေ နားစွင့်နေရတယ်။ မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် သံချပ်အဖွဲ့တွေ မှာ မောင်မောင်တို့ အဖွဲ့၊ ဧည့်သည်၊ ဆိတ်ပါးစပ်နဲ့နတ်မျက်စိ။ ဧည့်သည် သံချပ်အဖွဲ့ဆိုရင် သူတို့ ပင်တိုင်သီချင်း မှတ်မိ သေးတယ် ဘာတဲ့ ... ဧည့်သည်တို့က ပြောပြီဗျို့ ... အမှားအမှန်ဝေဖန်ဖို့ ... အိမ်ရှင်တို့ရဲ့ တာဝန်ဗျိူ့  နဲ့ အစချီပြီး ပြည်သူ့ဆိုင်စာရေး ခိုးတာဝှက်တာ အတိုအရှိုလုပ်တာကအစ ခေတ်စနစ် နဲ့ လူထုခံစားချက်ကို ထင်ဟပ်တဲ့ သံချပ်တွေထိုးတာပဲ။ ဆိတ်ပါးစပ်နဲ့နတ်မျက်စိ သံချပ်အဖွဲ့ဆိုရင် .... ဆိတ်ပါးစပ်တို့ပြောတာ မှန်တာတွေဖြစ်သည်... နတ်မျက်စိတို့ကြည့်တာ အကုန်မြင်ရသည် ... အဲဒီ သီချင်းနဲ့ အစချီပြီး ခေတ်စနစ်ကို အပီအပြင် သရော်လှောင်ပြောင်တဲ့သံချပ်တွေနဲ့ ပြည်သူလူထုခံစားချက်ကို ဖော်ထုတ်တင်ပြကြတာ။ ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် က အဲဒီ ဆိတ်ပါးစပ်နဲ့နတ်မျက်စိ သံချပ်အဖွဲ့သားတယောက်ပေါ့။ မောင်မောင်တို့အဖွဲ့ က အတော်များများက ၈၈ မှာ တောခိုသွားကြတာပဲ။ ဒါကြောင့် သင်္ကြန်ဆိုရင် သံချပ်တွေ အလှကားတွေကို လွမ်းတယ်ဗျာ။မနေ့က သင်္ကြန်အထိမ်းအမှတ် ကိုအေးကိုတို့အိမ်မှာ သင်္ကြန်ထမင်းသွားစားရတယ်။ ဖယောင်း နံ့လေး သင်းနေတဲ့ သင်္ကြန်ထမင်း နဲ့ သရက်သီး၊ ကြက်သွန်နီ ငါးခြောက် အစပ်အအဟပ်တည့်အောင်လုပ်ထားတဲ့ သင်္ကြန်ဟင်း က (ဖင်လန်နိုင်ငံမှာ) ရှားရှားပါးပါး တနှစ်မှာမှ တစ်လ၊ တစ်လမှာမှ တစ်ရက်၊ တရက်မှာမှ တနာရီလောက် တွေ့ခွင့်ရတဲ့ ဖင်လန်ပိတောက်လို့ ကျနော်က နာမည်ပေးထားတယ်။ အဲဒီ ဖင်လန်ပိတောက်က ဘယ်အိမ်မှာမှမပွင့်ဘူး၊ ကိုအေးကိုနဲ့ အမ တို့ အိမ်မှာပဲ ပွင့်တယ်။ နေ့လည်ဖက်ကျတော့ မိတ်ဆွေမိသားစုတွေစုပြီး ကိုမောင်လှတို့အိမ်မှာ သင်္ကြန်မုန့်လက်ဆောင်းလုပ်စားကြတယ်။ အဲဒီမှာ အင်တာနက်ကနေ ရန်ကုန်သင်္ကြန်၊ မန်းလေးသင်္ကြန်၊ (ကလေးတွေဖွင့်ကြည့်နေတော့) ထိုင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ရန်ကုန်သင်္ကြန်ကတော့ သိပ်မထူးခြားပါဘူး၊ မန်းလေးသင်္ကြန်က မြို့တော်ဝန်မဏ္ဍပ်၊ ထူးခြားတယ်၊ စင်အောက်က ယိမ်းအဖွဲ့တွေက သင်္ကြန်ရောင်စုံလေးတွေ ဆင်တူနဲ့၊ စင်ပေါ်က ယိမ်းအဖွဲ့ကတော့ အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံတွေနဲ့ မိုးပျံပူဖောင်းတွေကလည်း အစိမ်းရောင်၊ ကြံ့ဖွတ်တွေ မဲဆွယ်နေသလား အောက်မေ့ရတယ်။ အထူးခြားဆုံးက မြန်မာပြည်ကြီး သာယာပါစေ၊ ငြိမ်းချမ်းပါစေ၊ အေးချမ်းပါစေနဲ့ ဆုတောင်းပြီး မိန့်ခွန်းတွေ (လေဖော)ပေးသွားတဲ့ (၂၀၀၇ မှာ ဘုန်းကြီးတွေကို သတ်သွားတဲ့) မန္တလေးမြို့တော်ဝန်ကြီး။အဲဒီအချိန် ကျနော့် စိတ်ထဲမှာ (အဲဒီသင်္ကြန်ပွဲကြီးထိုင်ကြည့်နေရင်း) စဉ်းစားမိနေတာက ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပွဲတွေ။ မန္တလေးမှာတော့ ငြိမ်းချမ်းပါစေ သာယာပါစေနဲ့ ..ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ အမြောက်သံတွေ၊ သေနတ်သံတွေ၊ ယမ်းနံ့တွေ သွေးညှီနံ့တွေ။ ကျနော်တို့ မေးရမှာ ဗမာပြည် တကယ်ပဲ ငြိမ်းချမ်းပြီလား?အစိုးရနဲ့ပြည်သူ တကယ်ပဲ တသားတည်း ဖြစ်နေပြီလား? မန္တလေးမြို့တော်ဝန်ကြီး ရူးကြောင်မူးကြောင်နဲ့ သင်္ကြန်အမြောက်တွေ ထဖောက်နေတာလား? (သားဆွေ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ခွပ်တဲ့ဒေါင်းမှ ခွပ်ဒေါင်းဖြစ်မယ် .... ဖွတ်နဲ့ပေါင်းရင် ဖွတ်ဒေါင်းဖြစ်မယ်။------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Posted by
ဦးကြီး ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေအားလုံး ဦးကြီးအတွက် ဆုတောင်းပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ဦးကြီး ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အတော့်ကို ဆိုးနေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ ၁၆.၃.၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေ ၇ နာရီလောက်မှာ ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဖြစ်တာကတော့ အမောဖောက်လာတာပါ။ ဆေးရုံအရေးပေါ်ဌာနရောက်ပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ သွေးအားအရမ်းနည်းနေပြီး Hemoglobin ၅၇ ပဲရှိတဲ့အတွက် သွေးသွင်းကုသခဲ့ရပါတယ်။ နှလုံး၊ အစာအိမ်၊ အဆုပ် တွေပါ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ရပြီး ဒီနေ့လည်အထိ အဆုပ်ရောဂါဌာနမှာ အတွင်းလူနာအဖြစ်နဲ့ ကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။ အသက်ရှုကြပ်ပြီး အမောဖောက်နေတဲ့အတွက် အောက်ဆီဂျင်ပိုက်အမြဲတပ်ထားရပါတယ်။ ဦးကြီးမှာ နှလုံးရောဂါအခံရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်နီးပါး က နှလုံးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီး၊ နေ့စဉ် ဆေးစားကုသခံနေရသလို အပတ်စဉ် သွေးစစ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့နေ့လည်မှာ အခြေအနေဆိုးလာတဲ့အတွက် အဆုပ်ရောဂါဌာနကနေ တခါ အရေးပေါ်ဌာနကို ပို့ဆောင်ပြီး အရေးပေါ်ကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။ ဦးကြီးအခြေအနေ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ (သားဆွေ)-----------------အခုပဲ ကျနော် ဆေးရုံက ပြန်လာတယ်ခင်ဗျာ။ ဦးကြီးက သတိမေ့နေတယ်။ သွေးသွင်းထားရတယ်၊ နှလုံးကတော့ စိုးရိမ်စရာမရှိဘူး။ အဆုပ်က အတော်ရောင်နေတယ်။ စိုးရိမ်ရတယ်။ ဆေးရုံမှာတော့ စက်ပစ္စည်း ဆေးဝါး ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ဦးကြီးကို ဂရုတစိုက် လုပ်ပေးနေတာတွေ့ခဲ့ရတော့ စိုးရိမ်စိတ်တော့ လျော့နည်းရပါတယ်။ ဦးကြီးနဲ့ စကားပြောချင်ပေမယ့် သူက မေ့ဆေးပေးထားခံရပြီးသတိမေ့နေတော့ စကားမပြောခဲ့ရဘူး။ ဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုတွေကိုတော့ ကျနော် ဓာတ်ပုံတပုံ ပေးခဲ့တယ်။ ငါတို့က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ၊ ဦးကြီးလည်း တူတူပဲ။ ဒီဓာတ်ပုံကို ဦးကြီး ရဲ့ ခေါင်းရင်းမှာ ကျေးဇူးပြုပြီးထားပေးပါ။ ဒါဘုရားစေတီပုံပဲ၊ အဲဒါ ဦးကြီးတည်ခဲ့တဲ့ဘုရားပဲလို့ ၊ ဒါကြောင့် မနက် သူသတိရရင် သူ့ကို အဲဒီဓာတ်ပုံပြပေးပါ၊ ကျနော်တို့လာကြည့်သွားတယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြောပြပေးပါလို့ ကျနော် မှာခဲ့တယ်။ သူနာပြုတွေလည်း ချက်ခြင်းပဲ လုပ်ပေးပါတယ်။ ဘုရားပုံကို တရိုတသေနဲ့ ဦးကြီးခေါင်းရင်းမှာ ထားပေးတယ်။ မနက်ကြရင်လည်း ပြောပြပေးပါမယ်တဲ့။ ..... မနက်စောစော ကျနော် တခေါက်ထပ်သွားကြည့်ပါဦးမယ်။ မကေသီ၊ မစံပယ်ဖြူ၊ ကိုမိုးကြယ်နဲ့ သူငယ်ချင်း ချစ်ကို တို့ရဲ့ ဦးကြီးအတွက် ဆုတောင်းပေးကြတာတွေကိုလည်း ဆက်ဆက် ပြောပြပေးပါမယ်။ ----------------ဒီနေ့ ဆေးရုံကို နှစ်ခေါက်ရောက်တယ်။ ပထမ တခေါက် ဦးကြီး ကို ၀င်တွေ့ခွင့်မရဘူး။ ဧည့်ချိန်မဟုတ်လို့တဲ့။ နောက်တခေါက်ပြန်လာပါ ဆိုလို့ တခါ ထပ်သွားကြည့်တော့ ဦးကြီးအခြေအနေက မေ့ဆေးပေးထား တုန်း၊ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကို အိပ်မောကျနေတာပဲ။ ခေါင်းရင်းမှာ မနေ့က ပေးထားခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံလေး ရှိနေတယ်။ အားဆေး၊ သွေး၊ ဆေး၊ သွင်းထားတယ်၊ အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေ၊ ဆီးသွားဖို့ပိုက်တွေ တပ်ထားတယ်။ မြင်ကွင်းကမနေ့ကအတိုင်းပါပဲ။ နည်းနည်းထူးခြားလာတာက မျက်နာနဲ့အသားအရည် သွေးရောင်ပြန်လွှမ်းပြီး လန်းလာတာ သတိထားမိတယ်။ သွေးပေါင်ချိန် ပြန်တက်လာတယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်းကောင်းတယ်။ ဆရာဝန်ပြောပြတာက ဦးကြီးရဲ့ အဆုပ်နှစ်ခြမ်းမှာ ဘယ်ဘက်အခြမ်းက အတော်အခြေအနေဆိုးတယ်။ ညာဘက်ကတော်သေးတယ်တဲ့။ အဆုပ်ရောင်တဲ့ကိစ္စတော့ သူတို့ ကုနိုင်ပြီ၊ အခု အရောင် တော်တော်ကျသွားပါပြီတဲ့။ အစာအိမ်သွေးယိုတယ်လို့ သူတို့သံသယရှိထားတဲ့ကိစ္စကို စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးပါပြီတဲ့၊ အစာအိမ်မှာ အနာတွေ ဘာတွေ မရှိဘူးတဲ့။ အူလမ်းကြောင်းယောင်သလိုမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ ..ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါဗျာ၊ ကျနော်တို့ ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်၊ ကျနော်တို့ သေချာသိချင်ပါတယ်ဆိုတော့၊ ဆရာဝန်က အခြေအနေက ကောင်းလာပြီလို့ ပြောလို့မရသေးဘူး၊ စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေ ရှိသေးတယ်၊ အချိန်မရွေး တစုံတခု ထဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ အရေးပေါ်လာရင် ညကြီးမိုးချုပ်အချိန်ဖြစ်ပစေ ဆက်သွယ်လို့ရမလားတဲ့၊ အဲဒါနဲ့ ကျနော်နဲ့ ကိုမင်းလွင် နှစ်ယောက်သား ဖုန်းနံပတ်တွေ ပေးပြီး .. ရတယ် ကြိုက်တဲ့ အချိန်ခေါ်ပါ ၂၄ နာရီ အိုကေတယ်လို့။ .. ဒါပေမယ့်ဗျာ အဲဒီ ညကြီးမိုးချုပ်ခေါ်တဲ့ ဖုန်းအသံကြီး ကျနော်မကြားချင်ဘူး။ ဖုံးမခေါ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းတယ်ဗျာ။------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ခွပ်တဲ့ဒေါင်းမှ ခွပ်ဒေါင်းဖြစ်မယ် .... ဖွတ်နဲ့ပေါင်းရင် ဖွတ်ဒေါင်းဖြစ်မယ်။------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Posted by
ဦးနု က လက်နက်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ လဲခိုင်းတယ်။
နေ၀င်း က ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမယ်တဲ့။
ခင်ညွန့်(သန်းရွှေ) က လက်နက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလဲမယ်တဲ့။
သိန်းစိန်(သန်းရွှေ) က လက်နက် နဲ့ လက်တော့ပ် လဲမယ်တဲ့။
ကူမိုးကြိုး ရဲ့ ကာတွန်းဖတ်ပြီး စိတ်ကူးပေါ်လာလို့ ချရေးမိလိုက်တာပါ။
ခွပ်တဲ့ဒေါင်းမှ ခွပ်ဒေါင်းဖြစ်မယ် .... ဖွတ်နဲ့ပေါင်းရင် ဖွတ်ဒေါင်းဖြစ်မယ်။------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ဟိုတလောကမှ ထောင်ကလွတ်လာတဲ့ ပြည်တွင်းက ရဲဘော်တယောက်က ကျနော့်ကို လှမ်းမေးတယ်။ ဦးသိန်းစိန်မိန့်ခွန်းနားထောင်ပြီးပြီလားတဲ့။ ကျနော်က နားကိုမထောင်ဘူးဗျာ၊ bla bla bla တွေပါလို့။ ပြည်တွင်းက ရဲဘော်ရဲ့အမြင်ကတော့ ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်းက မှတ်ချက်ပေးရလောက်အောင် ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရပါဘူးတဲ့။ နောက် သူ့ရဲ့ မလွတ်လပ်မှုကိုပါတွေ့လိုက်ရတယ်တဲ့။ အဲဒါပါပဲဗျာ။ သိန်းစိန် မိန့်ခွန်းက ပြည်တွင်းကရဲဘော်ကတော့ အဲသလိုမြင်တော့ ကျနော် ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး နားထောင်မနေတော့ဘူး ဖတ်မနေတော့ဘူး။(သားဆွေ)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ခွပ်တဲ့ဒေါင်းမှ ခွပ်ဒေါင်းဖြစ်မယ် .... ဖွတ်နဲ့ပေါင်းရင် ဖွတ်ဒေါင်းဖြစ်မယ်။------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Posted by
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း ကျနော်မထောက်ခံခဲ့ပါ။
အခု ၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း ထောက်ခံတဲ့သူမဟုတ်ပါ။
သို့သော် သူ့ကြက် ကိုယ့်ကြက် ခွပ်ကြစတမ်းဆိုရင်တော့
ကိုယ့်ကြက်ပဲ နိုင်စေချင်တာ လူ့သဘာဝဖြစ်သည့်အတိုင်း
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမယ့် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဟာစစ်အစိုးရရဲ့ကြံ့ဖွတ်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်လေတော့
ကြံ့ဖွတ်တွေ ဘာတွေ ဆင်ကြံကြံနေတယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြံ့ဖွတ်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအစီအစဉ်ကို share လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
(သားဆွေ) Kyant Phut Meeting
တိုင်ရီစက်ရုံ အလုပ်သမားတွေရဲ့သပိတ်တိုက်ပွဲကို ဆွီဒင်နိုင်ငံက ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်ကျောင်းသားလူငယ်တွေတောင် ထောက်ခံနေပြီ။
မြင်းခွာတချက်ပေါက်ရင် ဗမာတပြည်လုံး မီးဟုန်းဟုန်းတောက်စေရမယ်၊ အလုပ်သမားတွေရဲ့ သပိတ်တိုက်ပွဲကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံတယ်။ ကိုဗဟိန်း ပေါင်း အမြောက်အများ ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။
တိုင်ရီစက်ရုံ အလုပ်သမားတွေရဲ့သပိတ်တိုက်ပွဲကို ဆွီဒင်နိုင်ငံက ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်ကျောင်းသားလူငယ်တွေတောင် ထောက်ခံနေပြီ။ ဒီထောက်ခံတဲ့စာကို သပိတ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ တိုင်ရီအလုပ်သမားတွေထံ အရောက်ပို့ပေးလိုက်ကြပါ။
တိုင်ရီ ဆန္ဒပြမှုအတွက် ဆွီဒင် ကျောင်းသား/လူငယ်များ ထုတ်ပြန်ချက် (ဘာသာပြန်)by Stephin Lee on Saturday, 18 February 2012 at 20:33
Worker's Solidarity League of Burma (အဖွဲ့အမည်ကို မြန်မာလို အတိအကျ မသိ၍ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ချန်ထားခဲ့ပါသည်။)
သင်တို့၏ ဆန္ဒပြနေမှုအား ထောက်ခံအပ်ပါသည်။ လေးစားအပ်သော ညီအကိုမောင်နှမများ ခင်ဗျား-
အင်္ဂလိုမူရင်း ထုတ်ပြန်ချက် Posted by
မျိုးချစ်မြန်မာက အားမာန်အပြည့်နဲ့ သီဆို တီးခတ်ထားတဲ့သီချင်းတပုဒ်ပါ။
..................... လွပ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲခွင့်ကိုယုံကြည်တဲ့ ၀ရမ်းပြေးတယောက်။ လောလောဆယ် ဒုက္ခသည်တယောက်အဖြစ်နဲ့ တတိယနိုင်ငံတခုမှာ ခေတ္တခိုလှုံနေထိုင်နေတယ်။ အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်မယ်။ ..................... ငါသည်နိုင်ငံမဲ့မဟုတ်။ ----- ဗမာနိုင်ငံသည် ငါ့နိုင်ငံ။ ငါသည်မိဘမဲ့မဟုတ်။ ----- ပြည်သူသည်ငါ့အမိ ပြည်သူသည်ငါ့အဖ။ ငါသည်တကောင်ကြွက်မဟုတ်။ ----- ရဲဘော်ရဲဘက်သည် ငါ့ညီ-ငါ့အကို-ငါ့မောင်နှမ။ ..................... ခေါင်းမာတယ်။ လွယ်လွယ်နဲ့မယုံတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်လာရွှီးနေတာကိုတော့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့နားထောင်ပေးတတ်တယ်။ ..................... မြန်မာပြည်မှာစိတ်ပညာအဓိကနဲ့ကျောင်းတက်ခဲ့ဖူးတယ်။ မြန်မာလိုရေးတတ်ဖတ်တတ်တဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းတတ်တယ်။ Finnish language ဘာသာပြန်လုပ်တယ်။ ပြင်သစ်လိုနှုတ်ဆက်စကားပြောတတ်တယ်။ ထိုင်းလို တစ်ကနေ တဆယ်အထိ ရွတ်ဆိုတတ်တယ်။ ဂျာမန်လိုအစားအစာမှာတတ်တယ်။ Sign language နည်းနည်းတတ်တယ်။ ..................... ၀ါသနာတွေက များလွန်းတယ် - လှေလှော်၊ဓားခုတ်၊သေနတ်ပစ်၊ကြက်တောင်ရိုက်၊ဂစ်တာတီး၊သီချင်းဆို၊စစ်တုရင်ထိုး။ စာတွေ ကဗျာတွေရေးတယ်။ ..................... မိတ်ဆွေတွေ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် website တွေ blog တွေလုပ်ပေးနေပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်တခါမှမယ်မယ်ရရမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခုကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လုပ်လိုက်တယ်။ ကိုယ်ယုံကြည်တာတွေကို SPACEမှာလာပြီးစုထားလိုက်တယ်။ ..................... SPACE ကိုလာရောက်အားပေးသွားတဲ့ မိတ်ဆွေများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်လည်းလာလည်ကြပါ။ စာရေးသားဆက်သွယ်လိုတယ်ဆိုရင် tharchitswe@gmail.com ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ (သားဆွေ) Oct2509
စာတိုက်ပုံး (စာရေးသားပေးပို့လာသူ မိတ်ဆွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)
“ကျနော်တို့တတွေလက်နက်မပါဘဲနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ လာပြီးစုဝေး နေကြတယ်။ အမှန်တရားအတွက် မတရားရင် ခေါင်းငုံ့မခံဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကျနော်တို့ ဘ၀များစွာစတေးခဲ့ပြီးပြီ။ လမ်းတွေပေါ်မှာ အသက်ပါ ပေးခဲ့ပြီးပြီ။ ကျနော်တို့ကိုဘယ်ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးနဲ့မှ ချုပ်ချယ်လို့မရဘူး။” (မင်းကိုနိုင်)
ကျနော်အတုခိုးခဲ့ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကိုကျော်သူ
ကျနော်ငယ်ငယ်က ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကိုကျော်သူကို အတုခိုးပြီး ကျောင်းလွယ်အိတ်မှာ အထုံးကလေးတွေထုံးခဲ့ဖူးတယ်။ ကိုကျော်သူ အနှစ် ၅၀ မဟုတ်။ နောက်ထပ် အနှစ် ရာထောင်ချီပြီး နေလို့ရရင်နေစေချင်ပါတယ်။
Burmese refugees in USA
"I arrived to U.S.A last5years ago but U.S government don't give me green card yet."
"I have my family and my driver license almost expire. I'm trouble like you." square dance and wonderful tonight
ကျနော်သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးတပုဒ်wonderful tonight ကို ကျနော့်သူငယ်ချင်းရဲ့ သူငယ်ချင်း...သူ့သားလေး Nolan တီးခတ်
ထားတာတွေ့ရလို့ဘလော့ဂ်မှာအမှတ်တရ တင်ထားလိုက်ပါတယ်။ သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာကျောင်းသား ရဟန်းတော်များ ဆီက
PDF ဖိုင် ပြောင်းလိုသူတွေအတွက်
Kachin News Group [KNG]
Kawthoolei Media Service
The People Voice (မိုးမြင့်မောင်)
ခွပ်ဒေါင်းသွေး အတ္တကင်းစင် ဒီမိုကရေစီလွင်ပြင်
လူငယ်မှတ်တမ်း (youth record)
ဆုံဆည်းရာ : လွမ်းအတိတ် အရိပ်ပမာ
မောင်ဒိုင်း (သိုင်းလောကဥသျှောင်) :D
သြဇီရောက်နေတဲ့ ABSDF က ဘော်ဘော်တွေ
Burma Democratic Concern (ကျနော့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဟောင်းတွေ)
Shô Ken Kai (ကူအိုပီအို ကင်ဒို အသင်း)
အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က လာရောက်သွားကြသည့် ဧည့်သည်များ
Get the အလည်လာသူများ